Talaabooyinka Koowaad ee Furitaanka Barnaamijkeena Cusub
Deyrtan, McKnight wuxuu ku dhawaaqay a barnaamij cusub oo raadinaya inuu hore ugu qaado caddaalad iyo sinnaan badan oo Minnesota ah. Hadafka: U dhis mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal. Waxaan dooranay sedex aag oo diirada lagu saarayo: dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, horumarka sinaanta, iyo ka qeyb qaadashada bulshada, waxaan dhamaanteen isku raacnay in hormarinta sinaanta midabku ay udub dhexaad tahay, oo aan aheyn dugsi sare, in la dhiso Minnesota oo u shaqeysa qof walba. Si loo dhiso mustaqbalkan firfircoon, barnaamijkan cusub wuxuu sharfayaa oo ku dhisnaan doonaa wixii aan ka barannay shaqadii aan ka taageeri jirnay bulshada sanado badan anagoo u sameynayna boos fikrado cusub.
Tani barnaamij cusub kasoo baxay sanad barasho. Waxaan sahaminay waxyaabaha gaarka ah ee Minnesota & #8217; farqiga u dhexeeya isirka iyo dhaqaalaha - oo ka mid ah kuwa ugu xun dalka. Waxaan sidoo kale sahaminay siyaabaha jinsiyada, qowmiyadda, iyo koodhadhka zip ay saadaalinayaan in shaqsi ama koox khibrad u leh awooda, helitaanka fursadaha, iyo natiijooyinka nolosha. Waxaan weydiinay su'aalo adag oo ku saabsan wixii la soo dhaafay, xilligan, iyo mustaqbalka Minnesota iyo waxa ay tabarucdeenu ahaayeen iyo waxay ahaan karaan. Waxaan ka maqalnay hoggaamiyeyaasha Minnesota iyo guud ahaan dalka; waxaan kulahadalnay asaxaabteena dhanka samafalka; waxaan sameynay cilmi baaris waxaana sameynay wadahadal iyo dood wadaag midba midka kale.
Casuumad loo fidiyay Deeq-bixiyeyaashayada qiimaha badan, shuraakadayada, iyo Xubnaha Beesha
Sannadka soo socda, waxaan horumarin doonnaa istiraatiijiyadaha qaabeynta iyo hagitaanka barnaamijkan cusub. Markii aan bilaabayo wajigan, waxaan si qoto dheer ula shaqeyn doonnaa deeq bixiyaasha, la-hawlgalayaasha, iyo kuwa kale ee gobolka oo dhan. Aasaas ahaan, waxaan aqoonsan nahay in si dhab ah loo hawlgalo, waa inaan eegno wax ka baxsan darbiyada Foundation.
Markii aan si qoto dheer ula hawlgalno deeq bixiyayaashayada iyo shuraakadayada, waxaan rajeyneynaa:
Muuji si cad oo qiimaheena ah ee xushmadda, sinaanta, wakiilnimada, iyo raadinta
La mid ah dhaqan soo ifbaxaya oo ku casuumay daneeyayaasha horumarka istaraatiijiyadeed, waana ficil aan rajeynayno in aan badanaa ku aragno shaqadeena iyo meelo kaleba.
Isku dardar aqoonta bulshada ee ku saabsan macluumaadka ka soo baxa cilmi-baarista, khubarada maxalliga ah iyo kuwa qaran, iyo shuraakeyaasha kale
& #8220; Iyada oo aasaaska ah, waxaan aqoonsan nahay in si dhab ah loo hawl galayo, waa inaan eegnaa wixii ka dambeeya derbiyada Aasaaska. & #8221; -KARA CARLISLE, MADAXWEYNAHA MADAXA BARNAAMIJYADA
Si loo gaaro himilooyinkaas, waxaan la shaqeyn doonnaa deeq bixiyeyaasha iyo la-hawlgalayaasha bilaha soo socda qaababkan:
Raadinta talooyinka bulshada
Taageerida wadahadalada wareega iyo kaqeybgalka shaqsi ee Weynada Minnesota iyo Twin Cities
Sameynta waraysiyo qaabeysan oo lala yeesho hogaamiyaasha shaqsiyeed, gudo iyo dibadba
Caawinta kaqeybgalka bulshada asaliga ah
La Wadaag Fikradahaaga Sida Loo Dhisto Garsoor Cadaalad ah oo loo Wadaago Minnesota
Maaddaama aan ka shaqeyneyno sidii aan u horumarin laheyn xeelado barnaamijkeenna cusub, waxaan rajeyneynaa inaad la wadaagi doontid xigmaddaada tallaabada koowaad. Waxaan ku casuumeynaa fikradahaaga iyo fikradahaaga si ay nooga caawiyaan sidii aan u sii qaabayn laheyn shaqada seddexda aag ee diirada lagu saaray:
Horusocod dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo xiritaanka farqiga hanti ee gobolka Minnesota.
Ku tababar horumar sinnaan ah bulshooyinka danyarta ah iyo bulshooyinka midabka leh, hubinta in beeluhu kaqeybgalaan jiheynta iyo ka faa iideysiga maalgashiga iyo siyaasadaha cusub.
Taageero a hawlgelinta bulshada kaabayaasha dhista sheekooyinka, cilaaqaadka, awooda, dhaqanada, iyo siyaasadaha hubiya in Minnesota ay tahay dowlad u shaqeysa qof walba.
Sida aan ku sheegnay annaga barnaamijka lagu dhawaaqo, waxaan aaminsanahay in Minnesota ay si gaar ah ugu diyaarsan tahay inay noqoto dowlad u shaqeysa dhammaan deganeyaasheeda — guud ahaan isirka, dhaqanka, qowmiyadda, dakhliga, juqraafi, iyo kala duwanaansho kale. Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla shaqeyno barnaamijkaan! Waxaan rajeyneynaa inaan u dhisno mustaqbal xamaasad leh dhammaan reer Minnesota, si wada jir ah. Waad ku mahadsantahay wadaagida fikradahaaga.
Waxaan ku soo dari doonaa fikradaha soo ifbaxaya howshan maadaama aan u horumarinay xeelado barnaamijkeena cusub ee Minnesota. Waxaan sidoo kale la wadaagi doonnaa wixii aan ka barannay jaaliyadaha ka soo qeybgalay, anagoo rajeynayna in waxyaabaha ka mid ah ay waxtar u yeelan karaan kuwa kale sidoo kale.